विचार / विश्लेषण महानायकको आक्रोश : मित्रराष्ट्रका प्रमुख भारत हुँदा हामीलाई नाकाबन्दी, नेपाल आउँदा कर्फ्यु ?
मित्रता भारी पर्ने भो
Thursday,3Nov, 2016 9:56 AM
काठमाडौं, १८ कात्तिक–भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी तथा आलोचना भएका छन् । खागसगरि भ्रमणको अवसर पारेर सरकारले दिएको सार्वजनिक विदाको व्यापक विरोध भएको छ । त्यसैगरि भारतीय राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा बाटो खाली गराइएको र जनताले दुख पाएको भन्दै त्यसको पनि विरोध भएको छ । महानायक राजेश हमाललाई पनि यो काम चित्त बुझेको रहेनछ । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत राष्ट्रपतिको सवारीले नेपालीले दुख पाएको आक्रोश पोखेका छन् । दुई देशबीचको मित्रता नेपालीलाई भारी पर्ने भो भन्दै उनले व्यंग्य गरेका छन् । 'मित्र राष्ट्रका प्रमुख आफ्नो देशमा हुँदा हामीकहाँ नाकाबन्दी, नेपाल आउँदा हामीलाई कर्फ्यु !'
१८ वर्षपछि भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भएकाले नेपालको तर्फबाट यस भ्रमणलाई निकै महत्व दिइएको छ । मुखर्जीलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विमानस्थल पुगेकी थिइन् । त्यस्तै सरकारले पनि भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणको अवसर पारेर बुधबार सार्वजनिक विदा दिएको थियो ।
तायाहाङ्मा राईको ‘कता कता सपनीमा’ गीत सार्वजनिक
गौरव–वसन्तको एल्बमको कृतिपूजा गरियो लोकप्रिय बन्दै नाटक ‘जुनेली’